Zoba amanqaku, imigca kunye neetekisi ezinqumlayo ukusuka kwi-Excel ukuya kwi-AutoCAD-Geofumadas
Ikhaya/AutoCAD-AutoDesk/Dweba amaphulo, imigca kunye neetekisi ze-polygonal ukusuka kwi-Excel ukuya kwi-AutoCAD
Ndinolu luhlu lwe-Excel. Kule ndawo kukho ulungelelwaniso lwe-X, ulungelelwaniso lwe-Y, kunye negama le-vertex. Into endiyifunayo kukuyidweba kwi-AutoCAD. Kule meko siza kusebenzisa ukwenziwa kwesikripthi kwisicatshulwa esidityanisiweyo kwi-Excel.
Qondanisa umyalelo wokufakwa kwamaphuzu kwi-AutoCAD
Le theyibhile kubonisiwe kule grafu, njengoko sibonile, iquka ikholam ekuthiwa enekona, ngoko UTM iququzelela ukuba X imihlathi, Y.
Into yokuqala ekufuneka siyenzile kukudibanisa izilungelelaniso njengoko umthetho we-AutoCAD ubalindele. Umzekelo, ukuzoba inqaku esiza kuhlala kulo: POINT uququzeleloX, ulungelelwanisoY.
Ngoko, oko esiza kwenzayo kufaka ikholomu entsha kunye nale datha echanekileyo, kwifomu:
Ukwenza oku ngqambileyo ndenze oku kulandelayo:
Ndibizele iseli i-D4 negama elithi POINT,
Ndidale ngomsebenzi weconcatenate, umtya obandakanya iseli yePOINT, emva koko ndishiye isithuba ndisebenzisa " ", emva koko ndidibanise iseli B5 ngokujikelwa ngamadijithi amabini, emva koko ukuzoba isiphumlisi endisisebenzisileyo "," , emva koko ndiye ndadibanisa iseli C5. Emva koko ndikhuphele eminye imiqolo.
Dweba amanqaku kwi-Excel
Ndikopishe iziqulatho zekholam D kwifayili yombhalo.
Ukuyiqhuba, chwetheza i-SCRIPT kwibar yomyalelo, emva koko ufake iqhosha. Oko kuzisa umhloli kwaye ndikhangela ifayile endiyibizileyo geofumadas.scr. Nje ukuba ukhethe, iqhosha elivuliweyo licinezelwe.
Kwaye ke, kukho apho sinezandi ezitsalwe.
Kwimeko apho amanqaku angabonakali khona, kufuneka usondle useto olupheleleyo lwezinto. Ngale nto sibhala lo myalelo Sondeza, ngenisa, Yandisa, ngenisa.
Ukuba imeko ibonakala ingabonakali, umyalelo we-PTYPE uyenziwa, ke lowo uboniswe kumfanekiso ukhethwe.
Qondanisa umyalelo kwi-Excel uze udwebe i-polygon kwi-AutoCAD
Ukuzoba ipholigoni iya kuba yingqondo efanayo. ngokwahluka esiza kuhlala kuko ngomyalelo we-PLINE, emva koko ulungelelwaniso oluhambelanayo kwaye ekugqibeleni ngumyalelo WOKUVALWA.
Siza kubiza le script geofumadas2.scr, kwaye xa siyiphumeza siya kuba nomkhondo womzobo. Ndikhethe umbala omthubi ukuba ndiqaphele umahluko phakathi kweezitshixo ezibomvu.
Qinisekisa umyalelo kwi-Excel uze uqaphele ii-vertic kwi-AutoCAD
Okokugqibela, sithatha indawo yokuchaza izicatshulwa zekholamu yokuqala njengezichaso kwiventi nganye. Ngale nto, siza kuwudibanisa lo myalelo ngale ndlela ilandelayo:
I-TEXT JC 374037.8,1580682.4 3 0 1
Lo myalelo ubonisa:
Umyalelo we TEXT,
Imeko yesicatshulwa, kweli phepha lichanekile, ke kutheni incwadi J,
Ingongoma ephambili yombhalo, sakhetha iCentral, ke kutheni incwadi C
Ulungelelaniso lwe-X, Y,
Emva koko ubukhulu bombhalo, sikhethe i-3,
I-angle yokujikeleza, kulo mzekelo i-0,
Ekugqibeleni isicatshulwa esiyithembayo, ukuba kumqolo wokuqala uya kuba yinombolo 1
Kuye kwasasazwa kwezinye iiseli, kuya kuba ngale ndlela:
I-TEXT JC 374032.23,1580716.25 3 0 2
I-TEXT JC 374037.73,1580735.14 3 0 3
I-TEXT JC 374044.98,1580772.49 3 0 3A
I-TEXT JC 374097.77,1580771.83 3 0 4
I-TEXT JC 374116.27,1580769.13 3 0 5
I-TEXT JC 374127.23,1580779.64 3 0 6
Ndabiza iofayile ye geofumadas3.cdr
Ndisebenzise umbala oluhlaza, ukuze ndiqonde umahluko. Nje ukuba iskripthi senziwe, sinombhalo kubungakanani obonisiweyo, kanye embindini wolungelelwaniso.
Khuphela Ifayile ye-AutoCAD esetyenziswa kulo mzekelo.
Inqaku libonisa indlela eyakhiwe ngayo itemplate. Ukuba usebenzisa itemplate kwi-Excel, esele yakhelwe ukondla idatha kuphela, Ungayithenga apha.
Ukuqhubela phambili kunye nokuphunyezwa kwe-BIM - ityala le-Central America
Ndifanele ndizobe amakhulu oxande abonisa imvume yokumbiwa kwemigodi, ziingxande ezinamacala aphakathi kunye no-x no-y macala, ndifuna uncedo, ndinedatha egqwesileyo
I-ArCADia BIM-Enye indlela yokuhlaziya